Sida loo dhajiyo sawirrada muuqaalka sawirada leh ee 'Instagram' oo leh 'Panoragram' Wararka Gadget
Sida loo dhajiyo sawirrada muuqaalka sawirada leh ee 'Instagram'
Rafa Rodriguez Ballesteros | | General, Tababarada
Hubso taas Miyaad aragtay qaar ka mid ah qoraallada 'Instagram' ee sawirro dhaadheer oo aan la jarin kala maqnaan Sawirada aad arki karto oo dhameystiran bidix ilaa midig. Wax la samayn karo iyadoo la adeegsanayo qalabka lagu daabacayo dhowr sawir isla markaana ku siin kara taabasho aad u xiiso badan koontadaada. Panoragram waa App ku habboon loogu talagalay
Maanta aan sharaxno talaabo talaabo sida aad ugu dhejin karto sawirro muuqaal ah Instagram-kaaga iyo inay u muuqdaan kuwo weyn. Thanks to codsi loo abuuray si gaar ah si aad uga hesho wax badan oo ka mid ah ikhtiyaarka ah in lagu daabaco dhowr sawir hal qoraal. Cos waxaan u sheegnaa wax walba oo ku saabsan sida loo isticmaalo Panorama.
1 Panoragram wuxuu naga caawiyaa sawirrada muuqaalka guud ee Instagram
2 Isticmaal Panoragram talaabo talaabo ah
2.1 Xullo sawir
2.2 Astaanta ka saar Abka
2.3 Ku dheji Instagram
2.4 Kani waa daabicitaankeenna
3 Panoragram, oo ah gunno tayo leh koontadaada 'Instagram'
Panoragram wuxuu naga caawiyaa sawirrada muuqaalka guud ee Instagram
Haddii aadan wali maqal arjigan, maanta dhammaantiin waxbaan kaaga sheegi doonnaa. Waxay kala yihiin dhowr barnaamij oo si gaar ah loogu heellan yahay hirgelinta aaladda Instagram-ka hooyo. Mid ka mid ah kuwa ugu guulaha badan, welina waa, waa "Repost" kaas oo aan "dib u soo diri karno" daabacaadda koonto kale oo annaga ku jirta.
Thanks to horumarinta software-ka, codsiyada dibedda ayaa awooda ballaadhi fursadaha ay bixiso heer sare ah ee loogu talagalay dadka jecel sawir qaadista. Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa "xirfad ahaan" u heellan Instagram-ka iyada oo loo marayo kafaala-qaadid ama xayeysiin. Tan awgeed had iyo jeer way raadinayaan siyaabaha asalka ah ee looga baxo xisaabaadka kale oo samee qoraalo kala duwan.
Marka laga soo tago tayada sawirada ama dhibaatada tallaalada, waxaa xiiso leh in la helo daabacado aan caadi ahayn. Waxaan aragnay codsiyo abuuraya, adigoo uqaybinaya hal sawir dhowr shabaqyo iyo sameynta dhowr daabacaad, sawir weyn oo lagu arki karo astaanta mosaic ahaan. Panoragram wuxuu u baahan yahay hal boostar oo keliya waxaadna arki doontaa in natiijooyinka ay aad u wanaagsan yihiin.
Isticmaal Panoragram talaabo talaabo ah
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno, dabcan, waa soo dejiso arjiga. Faahfaahin muhiim ahna waa ka hadlaynaa codsi bilaash ah. Sidoo kale ma laha xayeysiis "Waa qasab", in kasta oo haddii aan dooneyno daabicitaankeenna ugu dambeeya in astaamo laga helin App-ka laftiisa, haddana waa inaan daawannaa 30-ilbiriqsi fiidyow xayeysiis ah.
Markaan galno arjiga, Waxay si otomaatig ah ugu muuqan doonaan inay awoodaan inay doortaan dhammaan sawirada dusha sare leh ee aan ku hayno giraangirtayada sawiro. Haddii sawirka aan dooneyno inaan daabacno bilaa gooyn iyadoo la adeegsanayo daabacaadda badan ma muuqato, waa sababta oo ah cabirkeeda kuma haboona sawirka dusha sare. Tan awgeed, waxaa lagugula talinayaa inaad ka gooyso kor iyo hoosba (jiif ahaan) si ay u yeelato qaab dheeri ah oo dheeri ah.
Waxaan doorannaa sawirka in aan rabno inaan ku daabacno xulashooyinka laga heli karo kuwayaga. Shaashadda uu arjiga na tusayo waa sidan.
Marka la xusho sawirka, the tilmaamaha la raaco si daabacaadeenu ugu muuqato sida aad rabto. Markaad xulaneyso sawirka aad rabto, codsiga laftiisa ayaa mas'uul ka ah inuu u qaybiyo laba ama qaybo badan haddii loo baahdo, iyadoo ku xidhan cabirka. Marka waa inaan dooranaa adigoo gujinaya daabacaad badan oo xulo qaybaha sawirka ee la sameeyay sida saxda ah.
Astaanta ka saar Abka
Marka arjiga na tus tusmada sida aan ku arki doonno sawirka dusha sare ee arjiga, tan Waxay leedahay astaan-biyood yar oo lagu dhejiyay magaca barnaamijka Panoragram. Sidaan bilowgiiba kuugu sheegnay, Panoragram ma laha xayeysiin. Laakiin Haddii aan dooneyno inaan ka saarno astaanta App-ka, waxaan ku sameyn karnaa adigoo daawanaya fiidiyow xayeysiis ah 30-ilbiriqsi ah. Haddii aadan rabin in sawirkaagu calaamado qaado, waxay noogu muuqataa qiimo macquul ah. Barnaamijyada kale waxay sidan sameeyaan kaliya haddii aan soo dejino noocyada lacagta la bixiyo.
Marka aan riixno badhanka "Ka saar astaanta" Shaashad ayaa soo muuqan doonta halka ay ikhtiyaarka ka muuqan doono "hada daawo". Fiidiyowga yar ee xayeysiinta ah ayaa la ciyaari doonaa, kaas oo sidoo kale la xiriira barnaamijyada kale ee la xiriira sawir qaadista, saacadna la socota iyadoo la tirinayo 30 ilbiriqsi. Markay dhaafaan waxaan arki doonaa sida sawirkeenu u egyahay astaan ​​la'aan waxaa qoray Panoragram.
Ku dheji Instagram
Waxaa la joogaa waqtigii lagu dhajin lahaa tallaalka dusha sare ee 'Instagram'. Waayo, dhagsii "Share on Instagram". Hadda dalabku wuxuu na weydiinayaa haddii aan dooneyno inaan ku daabacno sheekooyinka ama qaybta wararka. Caqli ahaan waa inaan doorannaa wararka daabacan halkaas oo aan ku arki karno sawirkeena dusha sare leh iyada oo aan la jarin.
Kani waa daabicitaankeenna
Waa la dhammeeyay, Sow ma ahan wax fudud? Haddii aad u maleyneysay inaad awood u leedahay inaad ku sameysid noocan daabacaadda 'Instagram waxaad u baahnayd aqoon weyn, ama nooc ka mid ah barnaamij gaar ah, waad xaqiijin doontaa inaadan sameyn. Hal Soo dejinta Panoragram iyo raacida talaabooyinkan fudud waxaad ku kalsoonaan kartaa daabacaad tayo leh.
Panoragram, oo ah gunno tayo leh koontadaada 'Instagram'
Sidaad aragtay, ku siinta barta tayada koontadaada 'instagram' ma ahan wax adag. Eeg daabacadaha sida kan aan maanta ku tusnay waxay bixiyaan muuqaal aad u xirfadaysan hadaad rabto inaad meheradaadu istaagto. Iyo sidoo kale wuxuu si weyn u hagaajiyaa muuqaalka koontadaada gaarka loo leeyahay oo leh sawir gacmeedyo aan dillaacin oo soo jiita dareenka.
Miyaad wali soo dejin barnaamijka? Halkan waxaan kaaga tagnay xiriiriye.
Ku dar asal muuqaal ah wicitaanadaada fiidiyow ee Zoom
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Sida loo dhajiyo sawirrada muuqaalka sawirada leh ee 'Instagram'
Waa maxay RCS maxayse na siisaa